Forum serasera malagasy Fivavahana sy politika. Hetsiky ny mpitondra fivavahana - Dinika forum.serasera.org
Fivavahana sy politika. Hetsiky ny mpitondra fivavahana
Fitohizan'ny hafatra : Fivavahana sy politika. Hetsiky ny mpitondra fivavahana
Valiny : 22
endriny - 14/02/2018 18:00
Miala any indray ry mpanakorotana. Rehefa ianareo ve no mitarika sy manohana fanjakana an-salama-be ry mpitondra fivavahana, dia tsy maninona ary tsy politika izany.
Fa raha ny miaramila no mba manana ny safidiny dia enjehinareo.
Sa hoe aza ny ataoko no atao.
rhaj0 - 15/02/2018 14:53
Ireo mpitondra fivavahana gasy manao politika ireo aloha dia, na inona na inona argument anehonao fa mi-abuser ny pouvoir (sipiritoaliny) @ ondriny izy, dia ny onjy enjehina fa ny sofiny sy ny sainy efa tsentsina eee...
endriny - 15/02/2018 15:20
Tena marina ny anao. Mpitondra fivavahana manao toton’ondry bory sy mpizahozaho. Atao Ahoana fa ry zareo hono no solotenan’Atra e.
Ny mahavariana dia nisy Mpitondra Fivavahana iray izay tsy niraihina tamin-dry zareo tamin’ny fanonganam-panjakana farany teo. Nohidian’ny besandry tany amin’ny viaolao ilay io, ary nampisotroina ny amaniny. Saingy tsy nisy mpitondra fivavahana mba niaro na nitaraina akory.
rhaj0 - 15/02/2018 18:18
Ka dia ao zany zareo, banga mivanitika @ alina ao ee... TSY ho avy angaha ny backlash.. dia rehefa antitra ao zareo vao firan'ny zanany ao.
Ta_ntely_tsilavo - 16/02/2018 20:43
mampalahelo mintsy ty raha2 ty ah ,ny mpitondra fivavahana sasany ve no manao gnatao de izy rehetra no lasa maimbo? Humhum! Ku maninn moa rah somary asia precision kely gnolo tena tianareo teneny fa tsy olo aby mitondra fivavaha io no sahala nanao ino io ,lasa manimba sy mamotiky ny asa fitoria filazantsara avao gnafarany ,.
endriny - 17/02/2018 17:18
I Eva no nifampiraharaha tamin’ny bibilava dia ny zanak’olombelona rehetra no mihinana ny angotany
endriny - 17/02/2018 17:23
Ta-ntely-tsilavo a. Fa iza aza no mpitondra fivavahana nitsangana nanohatra an’i Razanakolona tamin’ireo Maopoera an’arivony nisy?
Iza no Pasitera nitsangana niaro an’ilay raikalahy nisotro ny amaniny.
Fehiny dia vitsy ny Marina Fa ny sisa Kijabolahy avokoa
Miharena - 20/02/2018 05:39
Manana adidy ny Mpitondra Fivavahana mba hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny eo anatrehan'Andriamanitra,
Ahoana tokoa moa no hatoritoriana raha toa ka fantatra hoe zana-piangonana no mandainga sy mamita-bahoaka ary mangalatra? Ka rehefa mpanao politika manao ireo fanao ratsy rehetra ireo ve tsy hotenenina izany?
Misy filazana izay manao hoe ny mpitondra no manana andraikitra be kokoa amin'ny fahombiazan'ny fizarana ny Tenin'Andriamanitra mba hamokatra ka ampamoahana avy izy ireo amin'ny andro fitsarana. Io ilay nolazain'i Jesoa hoe aza manao ho mpampianatra avokoa ianareo fa tsy mora ny miandry rehefa ampamoahana.
Raiso an-tsaina hoe iny hono ny Filohan'ny FJKM sy ny Filohan'ny EKAR anontaniana hoe ahoana moa ny mpanompoko Rajao sy Ravalo sy Rajoelina no lasa toa izatsy sy izaroa nefa mba nankiniKO taminareo ny fitaizana azy avy? Dia mangidihidy ihany ny tena dia mandray andraikitra raha mbola nomena tombonandro eto ambonin'ny tany mba misy havaly rehefa tonga ny fodiana hoe efa nanao izay afakay izahay fa dia io izy io Ray fa dia Ianao sisa mahalala izay tokony hatao azy ireo!
rhaj0 - 20/02/2018 14:32
endriny Ta-ntely-tsilavo a. Fa iza aza no mpitondra fivavahana nitsangana nanohatra an’i Razanakolona tamin’ireo Maopoera an’arivony nisy?
Toa efa niala tsiny ihany kosany Itpkl Armand Gaetan eee.. dia Raymond koa efa mba niteny ihany... taty aoriana.
F'i OMAR k'lou dia io firan'i Vatican tsy mety Cardinal io ee...
Sa i Jesoa mihntsy no mamingana a'i OMAR ao io?
endriny - 20/02/2018 16:17
Toa efa niala tsiny ihany kosany Itpkl Armand Gaetan eee..
I Gaetana ange efa nisotro rorono tamin'ireny e, fa ireo am-perin'asa ... ihihihihi.
Mbola mamy tena mamy leitsy...
ny miaraka amin'i Lafrantsa a,
F'izay gasin'ialahy any
omeo ompa sy latsa (avy amin'ny baiboly io, afobe mandrakizay)
Mody fanina fotsiny ny Vatican amin'i OMAR, fa azony atao ny manery azy hisotro ronono raha tena tsy tiany ny nataon'i OMAR
endriny - 21/02/2018 15:29
Ny tena nahavariana dia na ireo Mpitandrina nahazo fanampiana tamin'ny fanitarana ny trano fiangonana tamin'ny andron'ilay raikalahy aza, dia samy nitsikomba tamin'ny fandrodanana daholo. Satria nahoana?
Nisy volabe tsy took tsy forohana nomena an-dry zareo tamin'ny fanitarana ny fiangonana, ary samy te hitahiry izany tany am-paosiny ka dia aleo roahina ilay nahita saosy sao manao fitsirihana.
Vokany, fiangonana an'arivony eto Madagasikara no nijanona ny fanamboarana azy. Ka ilay fiangonana teo aloha dia lasa nifonosan'ny trano ciment tsy vita
endriny - 23/02/2018 16:31
Taloha dia nisy ny feo nandeha fa nopoizinina no nahafaty an'i Gaetan, satria nitsikera an'i OMAR sy ny Katolika. Ary izay mihintsy koa aza no nanerena azy hisotro ronono tamin'ny maha Kardinaly azy.
Noho io fanenjehana natao azy io dia naleo mihintsy niala, nisitaka tany amin'ny tany tsy misy lalana tany Befandriana. Taiza tokoa moa no nisy Mopera antitra nandeha nipetraka tany amin'ny tany lavitra hopitaly sy saro-dalana raha tsy izy. Izy koa anefa tsy avy any Befandriana akory. Tao raha?
Saingy mbola niresaka Politika ihany izy, ka rehefa niakatra tao Mahajanga dia nokarakarain-dry zareo, ary dia maty teny amorontsiraka. Dia nolazaina hoe nijanona tampoka ny fony.
Fa resaka nandeha foana io, saingy aleo averina eto mba ho hitan'ny olona.
mirananirina - 26/02/2018 17:02
Ka ny miaramila efa ratsy foana tsinona dia tsy manana rariny mihitsy @ ireo. Fa rehefa zareo mpitarika fifavahana manaraka manao politika na aiza na aiza dia mety tsara aminy.
Amiko samy olombelona afaka mifidy daholo nefa mifanenjika eo foana.
endriny - 27/02/2018 15:50
Tsy hoe ratsy foana kosa ny Miaramila e.
Raha tamin’ny andron’ny fanjanahan-tany izay dia nantsoin’ny fiangonana sy ny mpanjanaka hoe mpampandry tany.
Fa rehefa nahazo fahaleovantena ny Malagasy dia nantsointsika hoe Herimpamoretana ny miaramilatsika.
Ka isika ihany izany no tsy tia antsika.
rhaj0 - 27/02/2018 16:20
Amiko kosa aloha ny ankabeazan'ny miaramila, indrindra ireo faramparany ireo, dia tena jiolahim-boto tsisy conscience mihintsy ee.. Ry Ndrianari sy Lesarla ve dia mba inona??
Koa na ireo taloha azany.. Ohatra hoe, nodimandry i Mampila, dia hoe, vrai de vrai.. Ilery anefa no ministra ary izy ni-politiser ny foloalindahy tao, sy nanomboka ity mamokatra jeneraly @ sobika ity . Koa na ry Sibon koa azany tao. Koa na i Gabriel azany, raha ny reko, dia izy ihany koa no namely iilay hoe, io rizalahy izay ihinanana atao fa tsisy dikany izany aaa...
I Ratsimandrava sy ny politikany izao no isan'ny hany mba fanantenana.. nefa talohan'izay izy tena henjana be t@ olona tany atsimo (1971). Ry Andriamahazo na koa ry RAmarolahy taloha ireny, na koa Rakotomalala, ahoana azany no TSISY niteny nefa ny raharaham-pirenena niditra tournant, ary dia io lasa ni-spirale mivaralila tsisy fiafarany io h@ izao.
raha izaho manokana dia rikoriko tanteraka @ ireo
endriny - 27/02/2018 18:25
Raha mivaralila ny Miaramila Malagasy dia efa ela teto no nisy ady an-trano.
Saingy ny mpanao politika no mampiasa ny Miaramila ho fiarovana ny tombotsoany. Ka raha hiaro ny tombotsoan’ny hafa kosa ve, tsy aleo koa mba miaro ny an’ny Tena. Dia io ilay lasa manao politika ny Miaramila. Satria mba samy mitady fihinana.
Ny Miaramila raha diso sady very asa, no very voninahitra, migadra...
Ny mpanao politika sy ny mpitondra fivavahana raha diso sady arovan’ny Miaramila, no lasa malaza ary omena fampihavanana.
Fehiny mbola hendry ny Miaramila Malagasy, Fa raha tany amin’ny tany hafa no toa izao ny fiainana efa nataon’ny Miaramila kitoza tamin’ny poteau ireo mpitondra ireo
rhaj0 - 27/02/2018 18:40
Ka sao kosa indray hoe, ireo miaramila "voavidy" no mitana ny lakile, ary dia poritra daholo ireo "miaramila hendry" hafa eee..
rhaj0 - 27/02/2018 19:10
rehefa mieritreritra eto aho, dia mahita fa tena matetika loatra, dia an-tanan'ny JIOLAHIM-BOTO foana ny fahefana, na ao zamerika ao izao ohatra, fa indrindra any @ tany mahantra. Ny olana dia ny olona tsotra/mahitsy sy mba manana conscience ihany dia mangina sy mihataka. Ary rehefa lasan-dry kivindro ny taolana, izay vao mety ho sahy manangona vato, nefa tsy sahy mitoraka akoriny zareo eeee...
Fa ny ao zamerika sy ry trump izao k'lou, dia efa manomboka ny backclash na ny retour de manivelle eee... Fa ny any amintsika toa tena lozotra miha-lozotra ao foana izany.. sa diso aho?
Miharena - 01/03/2018 06:16
Lasa henjk'olona ilay fitohizan'ny lahakevitra ataonareo Rhaj0 sy Endriny fa tsy milaza ny antony mazava mahatonga ny Mpitari-piangonana hiditra amin'ny fiaraha-monina ara-politika.
Angamba aloha ny atao hoe politika no efa LO ka tsy azon'ny mpitondra fiangonana hitsabahana ve?
Raha izay manko dia mazava tsara izany fa rehefa politika no voambolana dia voankazo LO no ao an-tsaina dia avelao ho an'ny mpikirakira izany ihany no manao azy ary ireo mpikirakira ireo dia tsy mba mamokatra voankazo tsara fa ireo LO ireo ihany no avadibadiny eo.
Fa raha jerena indray hoe ahoana ary no ataon'ny mpitondra fiangonana? Mijery izy hoe ratsy ny olona ka tokony hodiovina amin'ny fibebahana sy ny fitodihana amin'ILAY MAZAVA mba tsy hilalao voankazo LO fa mba hamokatra amim-pahombiazana.
Ka aiza amin'ireo no tena tianareo hahatongavana hoe tsy tokony hiditra ilay mpitondra fiangonana?
endriny - 02/03/2018 15:13
Resaka no atao eto fa tsy enjika.
Fa rehefa ny mpitondra fiangonana ve no mitsikera ny miaramila dia tsy enjika io
Fa raha izahay no mitsikera ny mpitsondra fiangonana dia enjika izay?
Aza atongilangilana ohatran'ny famakiana biblobiloka biblika re ny resaka e